Cách Trồng Rau Muống Tại Nhà "ĐƠN GIẢN NHẤT" | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Cách Trồng Rau Muống Tại Nhà “ĐƠN GIẢN NHẤT” | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Isipinatshi samanzi yenye yezona mifuno zidumileyo kunye neziqhelekileyo kwizidlo zosapho zaseVietnam. Indlela yokukhulisa isipinatshi samanzi Eli ligama elingundoqo elifundwa ngabantu abaninzi kwaye balisebenzise ukukhula ekhaya.
Yiza kwinqaku lanamhlanje, masifunde kunye noFao malunga nobuchule bokukhulisa uzuko lwasekuseni kunye nezona ndlela zilula zokukhathalela kunye nokuvuna.
1 Khetha indawo yokulima isipinatshi samanzi
2 Lungiselela izixhobo zokukhulisa isipinatshi samanzi
3 Ukwenza umhlaba wokulima isipinatshi samanzi
4 Eyona ndlela isebenzayo yokukhulisa isipinatshi samanzi ekhaya
4.1 1. Indlela yokukhulisa imbewu yozuko lwasekuseni
4.2 2, Ukhula njani isipinatshi samanzi kwisikhongozeli seStyrofoam
5 Ukhathalelo lwesipinatshi samanzi
5.1 1. Ukunkcenkceshela
5.2 2. Ukuchumisa
5.3 3. Uthintelo kunye nokunyangwa kwezinambuzane kunye nezifo kwisipinatshi samanzi
6 Vuna isipinatshi samanzi
Khetha indawo yokulima isipinatshi samanzi
Indawo yokwenza Indlela yokukhulisa imbewu yozuko lwasekuseni kubaluleke kakhulu, ichaphazela ngokuthe ngqo ukukhula komthi, ngoko kufuneka ukhethe indawo efanelekileyo yokuwutyala.
Ingxaki yokuqala phambi kokuba uqalise indlela yokukhulisa isipinatshi samanzi kukuba kufuneka unike ingqwalasela kwindawo esikuyo isipinatshi samanzi, isipinatshi samanzi sinokukhuliswa kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo ezifana naphantsi kwamanzi, ngasemlanjeni, emhlabeni okanye nakwiibhokisi ze-styrofoam kunye nee-emele.
Le mifuno ikhula kakuhle kuphela kwindawo ezinobushushu obuphezulu, ukufuma kwaye ikwadinga ukukhanya kwelanga okwaneleyo ukunika isipinatshi samanzi.
Lungiselela izixhobo zokukhulisa isipinatshi samanzi
Ukwenza inkqubo yokukhulisa isipinashi samanzi ibe lula kwaye ilungele ngakumbi, kufuneka ulungiselele izixhobo eziyimfuneko kwangaphambili. Lungiselela ngaphantsi kweFao edwelisiweyo.
Ukuphunyezwa indlela yokukhulisa isipinatshi samanzi omileyo ke kufuneka ulungiselele ezinye izinto eziyimfuneko ekukhuliseni imifuno ezifana ne-styrofoam, ii-emele, njl.
Ngesipinatshi samanzi esithanda ukufuma, akufuneki ugqobhoze umngxuma omkhulu kakhulu oya kubangela ukuba amanzi akhuphe ngokukhawuleza kwaye akhukulise umhlaba. Izikhongozeli zemifuno ezisetyenziselwa ukulima isipinatshi zamanzi kufuneka ziphakanyiswe ubuncinane nge-4cm ukusuka emhlabeni.
Ukwenza umhlaba wokulima isipinatshi samanzi
Kuba isipinatshi samanzi sisityalo esingakhethiyo emhlabeni, ungatyala ispinatshi samanzi ngokupheleleyo, ukhulise isipinatshi samanzi ngamasebe okanye ukhulise isipinatshi samanzi ngembewu.
Itekhnoloji yokukhulisa isipinatshi samanzi amanzi okanye amanzi omileyo iindlela zokulinywa kwesipinatshi zifanelekile kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo, ngoko unako ukukhulisa isipinatshi samanzi kwimihlaba emininzi rhoqo unike ingqalelo ubungakanani bamanzi anikezelweyo kwizityalo ngokwaneleyo ukuba imifuno ikhule, Nangona kunjalo, uhlobo olufanelekileyo kakhulu. Umhlaba wokulima isipinatshi ngumhlaba onodaka oluninzi, umhlaba ovunduvundu kunye nomhlaba omanzi kancinci.
Malunga neentsuku ezisi-7 ukuya kwezili-10 phambi kokutyala isipinatshi samanzi, kuyacetyiswa ukuba usichumise ngomgquba okanye isichumiso se-bio-organic, emva koko ulime ngokucokisekileyo kwaye ucoce lonke ukhula emhlabeni ukuze kukhule uzuko lwasekuseni ngesivuno esikhulu.
Eyona ndlela isebenzayo yokukhulisa isipinatshi samanzi ekhaya
Kwindlela yokukhulisa isipinatshi samanzi, iFao yahlulwe yangamanyathelo ama-3 amancinci, inyathelo ngalinye lihambelana nenqanaba eli-1, inqanaba ngalinye lifuna ukuba uqonde iziseko zeendlela zokutyala kunye nendlela yokukhulisa isipinatshi samanzi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
1. Indlela yokukhulisa imbewu yozuko lwasekuseni
Indlela yokukhulisa isipinatshi samanzi kulula kakhulu kwaye kulula kakhulu ukuphila, unokuqhubeka nokukhula uzuko lwasekuseni ngembewu okanye usebenzise isiqu esidala kunye neengcambu uze utyale ngqo emhlabeni.
Inyathelo loku-1: Yenza ukufunxwa kunye nokufukamela imbewu yozuko lwasekuseni
Gxuma imbewu yesipinatshi emanzini ashushu kunye nobushushu obuphakathi kwe-30 kunye ne-40 ° C kangangeeyure ezi-3 ukuya kwezi-6, uze ususe imbewu, uhlambe ngamanzi acocekileyo kwaye ufukamele kwitawuli efumileyo kunye nobushushu obuyi-25 ukuya kwi-30 °C ixesha elide. 6 ukuya 10 iiyure.
Emva koko khangela ukuba imbewu iqhekekile kwaye intshula, ukuba imbewu iye yaqhekeka kwaye yantshula, yiyeke imbewu yome kwaye emva koko ingahlwayelwa.
Inyathelo lesi-2: Ukwenza ukutyala imbewu yesipinatshi yamanzi
Ukuba uhlwayela imbewu yesipinatshi emanzini ngqo, kufuneka unike ingqwalasela phambi kokuba uhlwayele imbewu ukuze wenze umhlaba ngokucokisekileyo, ukhululeke, kunye nebhedi enobude obungange-20 ukuya kwi-30cm. Ukukhulisa imbewu yozuko lwasekuseni, umhlaba kufuneka uxutywe nezichumiso zendalo ezityebileyo.
Sika imiqolo ngokulinganayo ngomgama oyi-20cm ubude kunye ne-1cm ubunzulu, emva koko uhlwayele imbewu ngqo emhlabeni ngokwemiqolo esele isikiwe, emva koko sebenzisa isisefo somgquba ukugquma imbewu kakuhle, sasaza imbewu ye-Basudin ukukhusela iimbovane, iiqakamba, intshulube…
Qalisa ukunkcenkceshela ngamaxesha ama-2 ngemini kusasa nangokuhlwa kwiveki yokuqala. Kwiveki yokuqala yokuhlwayela, imbewu ingagqunywa ngeendiza okanye ngeseyile yeplastiki ukugcina ukufuma.
2, Ukhula njani isipinatshi samanzi kwisikhongozeli seStyrofoam
Inyathelo loku-1: Iidrills
Ngokuphathelele indlela yokukhulisa isipinashi samanzi kwibhokisi ye-foam, unokusebenzisa ngokupheleleyo indlela yokukhulisa uzuko lwasekuseni ngokusika okanye ubuchule bokukhulisa isipinashi samanzi ngembewu.
Okokuqala ugalela ubungakanani bomhlaba kwi-emele okanye kwi-emele, umhlaba wembewu kufuneka ube nokufuma okwaneleyo, othambileyo, omdaka, umhlaba ococekileyo kunye nobutyebi bezondlo.
Nkcenkceshela kwaye udibanise kakuhle de umhlaba ufume, emva koko ucande umphezulu womhlaba, wenze umgca othe tye ngobunzulu obungange-0.5cm, kufuneka uqaphele kwakhona, kweli nqaku ndibhekisa kubuchule bokukhulisa imifuno. asiyondlela ilungileyo yokukhulisa isipinatshi samanzi.
Ukuhlwayela ngokulinganayo kusasaza imbewu yemifuno kumphezulu womhlaba, hlwayela imbewu kumgama ophakathi, ingabi ngqindilili kakhulu. Emva koko, gubungela umphezulu ngocwecwe oluncinci lomhlaba ococekileyo. Ukunkcenkceshela kutshiza intwana yamanzi emhlabeni ukunyakamisa umhlaba. Ukunkcenkceshela rhoqo 1 amaxesha 2 ngemini kusasa nangokuhlwa kwiveki yokuqala ye-1.
Sebenzisa inethi enemibala, ikhadibhodi okanye ingca yefula ukogquma itreyi yasenkulisa kwaye ubeke imbiza ye nursery kwindawo enomthunzi kangangeveki enye ukukhuthaza ukuntshula kwesipinatshi samanzi.
Amanzi ngokwaneleyo kunye namaxesha ama-2 ngosuku kusasa nangokuhlwa. Emva kweveki enye yokuhlwayela, imbewu iya kuntshula kwaye intshule, ngoku izise izityalo kwindawo elula ukuze zikhule izityalo.
Xa umthi ufikelela kubude obuyi-2 ukuya kwi-3 cm, qhawula umthi ukuze uncede izithole zibe nokuncamathela okungcono komhlaba.
Inyathelo lesi-2: Ukukhula kwamanzi isipinatshi
Xa izityalo zenza amagqabi ama-4 ukuya kwa-5, qalisa ukuthena izityalo zespinatshi ezisencinci zamanzi ukuze zitye ngokufanayo nezihluma, ushiye kuphela umgama ophakathi kwemiqolo kunye nezityalo oziqelelene nge-10 ukuya kwi-15 cm.
Ukuba ulandela indlela yokukhulisa isipinatshi samanzi ngokusikwa, kufuneka ulungiselele kuphela umzimba wamanzi wesipinatshi ukufikelela kubude obungama-20cm, amasebe kufuneka abe madala kwaye omelele kwaye abe neengcambu.
Nika ingqalelo kwinqanaba lokukhulula umhlaba, yenza ibhedi yomhlaba kwaye emva koko udibanise isiqu somthi ngendlela ethe tye, ugcwalise umhlaba 3 ukuya kwi-4 nodes ubunzulu, umgama phakathi kwemifuno malunga ne-10 cm ngaphandle, de ingcambu isikiwe.
Emva kokutyala isipinatshi samanzi, zibeke kwindawo ezinomthunzi okanye kwikhava ukwenza umthunzi wemifuno. Selela nje isipinatshi samanzi ngamanzi aneleyo yonke imihla.
Ukhathalelo lwesipinatshi samanzi
Ukunyamekela isipinatshi samanzi linqanaba elibaluleke kakhulu, lichaphazela ngokuthe ngqo ukukhula kwesityalo, kufuneka unkcenkceshele rhoqo kwaye uchumise isityalo ukuze isityalo sesipinashi samanzi sibe nempilo kwaye sibe nesivuno esiphezulu.
Isipinashi samanzi kulula kakhulu ukuphila kwaye sikhula ngokukhawuleza, le mifuno ayinakuchaphazeleka kakhulu kwizinambuzane kunye nezifo, ngoko ayifuni ukuba uyinakekele.
Logama usebenza nzima ukunkcenkceshela rhoqo imifuno, ngakumbi ngexesha lonyaka elomileyo nelanga, isipinatshi samanzi siyathanda ukukhula kumhlaba onodaka, ngoko ke akukho mfuneko yokoyika ukunkcenkceshela kakhulu, nto leyo ebangela ukuba imifuno ibe namanzi njengezinye. imifuno.
Nangona kunjalo, ngexesha lemvula enkulu, kufuneka ugubungele imifuno ukukhusela amanzi emvula ukuba aqhekeze kwaye abole.
Isipinatshi samanzi siyavundiswa, ngokuqinisekileyo siya kuba luhlaza kwaye sikhule ngokukhawuleza, sebenzisa ifomula yesichumisi esingezantsi ukuze ufumane ukusebenza okuphezulu.
Indlela yokukhulisa isipinatshi samanzi ayifuni kuchunyiswa rhoqo, yongeza nje initrogen, phosphorus kunye nezichumiso ze urea ukunceda amanzi isipinatshi sikhule kakuhle.
Ngexesha apho isipinashi samanzi sinamagqabi ama-3 ukuya kwe-4, kukho isiganeko samagqabi aluhlaza okanye amaqabunga aphuzi, isityalo sidibana nale meko ngenxa yokungabikho kwe-nitrogen kunye neengcambu ezingaphuhliswanga.
Ngoko kufuneka uchumise imifuno ngokuxuba isixa se-phosphate fertilizer kunye ne-urea kwaye emva koko unkcenkceshele ngokulinganayo kwisipinashi samanzi emva kwemini epholileyo kunye nentsasa elandelayo, kufuneka inkcenkceshelwe kwakhona.
Faka isichumiso okwesibini, iintsuku ezilishumi ukuya kweziyi-15 ngaphandle kokuqala, xuba izichumisi ze-NPK okanye ze-DAP ngamanzi kunye namanzi ngokulinganayo kwisipinatshi samanzi kwi-phole yasemva kwemini.
3. Uthintelo kunye nokunyangwa kwezinambuzane kunye nezifo kwisipinatshi samanzi
Ngexesha lokutyala isipinashi samanzi, akunakuphepheka ukuba isityalo siya kusuleleka ngezinambuzane kunye nezifo, ukuphepha izinambuzane kunye nokuzitshabalalisa, kufuneka usebenzise iziyobisi ezifanelekileyo.
Nazi izifo ezinokuthi isipinashi samanzi sidityaniswe kunye namachiza afanelekileyo, musa ukuzithoba kodwa ungayihoyi ukutshatyalaliswa kwezinambuzane.
Isipinatshi samanzi asifane sosuleleke zizifo eziyingozi, kodwa kukho izinambuzane ezimbalwa ezinokulimaza isipinatshi samanzi okufuneka uziqaphele:
Iintshulube eziluhlaza, iintshulube zesilika, iintshulube, iintshulube, iintshulube kunye nethrips, ukuba ubona ezi ntshulube zisenza emithini, sebenzisa esinye sezitshizi ezifana ne-Aztron, Dipel 6.4 WP, Biocin 16 WP, njl. olona thintelo lusebenzayo.
I-Grey planthoppers ivame ukubonakala kwaye ibangele umonakalo kwisipinashi samanzi owomileyo, ukutshabalalisa esi sifo, kufuneka usebenzise i-Cyperan 25EC, i-Bassa 50ND, njl., kwaye uyitshize ngokucokisekileyo kuso sonke isityalo.
Umhlwa omhlophe ukholisa ukwenza ispinatshi emanzini kakhulu ngexesha leemvula. Ukuthintela esi sifo, kufuneka ubeke ingqalelo ekunyukeni okuphezulu kwemifuno ukuze ukwazi ukukhupha kakuhle. Xa ufumanisa izifo zezityalo ezenza kwisipinashi samanzi, sebenzisa iziyobisi ezifana ne-Score 250 EC, i-Regent 80WG, i-Sherpa 20EC, i-Dithane 80WP, i-Sumicidin 10EC, i-NPV ye-biological drugs ukutshiza ngokuthe ngqo kwimifuno.
Vuna isipinatshi samanzi
Ngokuqinisekileyo eli linqanaba wonke umntu ajonge phambili kulo kakhulu ngexesha lokukhula kozuko lwasekuseni, kodwa musa ukukhawuleza ukuyivuna ngaphambi komgangatho. Nceda uthembele kwiimpawu zesipinatshi samanzi, ixesha ukususela ekuphunyezweni kwendlela yokukhulisa uzuko lwasekuseni.
Uzuko lwasekuseni luya kuvunwa kwisithuba seeveki ezi-4 ukuya kwezi-6 emva kokuhlwayela, ixesha lokuvuna kunye nomgangatho wemifuno efunyenweyo ixhomekeke kakhulu kubushushu, amanzi kunye neemeko zokhathalelo lwezityalo. Ukuba usiphatha kakuhle isipinatshi samanzi, ispinatshi samanzi singavunwa amaxesha amahlanu.
Xa amanzi isipinatshi sifikelela kubude obungange 30 ukuya kwi 40cm, kufuneka uqhubeke usike isiqu sibe yi-3cm ukusuka emazantsi esityalo. Emva kweveki enye, isityalo siya kuqhubeka sihluma.
Ngeli xesha, uxuba isixa senitrogen, iphosphorous kunye neurea ngamanzi axubileyo kwaye emva koko unkcenkceshele imifuno ukukhuthaza isipinatshi samanzi ukuba simile kwaye sikhule ngokukhawuleza amagqabi amatsha.
Ngoko siye safunda malunga indlela yokukhulisa isipinatshi samanzi kwakunye neendlela zokutyala, indlela yokunyamekela imithi. Ngeli nqaku, i-Fao inethemba lokuba ungazikhulisa izityalo zakho zesipinatshi ezitsha nezivelisa isivuno esikhulu. Umnqweno omhle!